LEGO သည် Adidas GWP အရည်အချင်းပြည့်မီသောအသုံးစရိတ်ပြောင်းလဲမှုကိုတုံ့ပြန်သည်
07 / 07 / 2021 07 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 268 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, Lego Adidas, လူကြီးများအတွက် Lego, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည် ၄ ​​င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းလွှာမှပြောဆိုချက်ကိုတုန့်ပြန်လိုက်ပြီး ၄၀၄၈၆ အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းသုံးစွဲသည် adidas မူရင်း Superstar ကိုလျှော့ချတော့မည်။
အဆိုပါ နောက်ဆုံးပေါ်ဂျာမန် LEGO သတင်းလွှာ ယခုလ၏လက်ဆောင်နှင့်အတူ - ၀ ယ်ယူမှုသည်ယူရို ၈၅ ထက်ပိုသောအော်ဒါများအားလုံးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ LEGO.com။ ထိုအချက်ကကုမ္ပဏီသည်ရှုပ်ထွေးသောအနိမ့်ဆုံးအသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ပြင်ဆင်နေပြီး၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ဈေးနှုန်းထက်လျော့နည်းစေသည် လူကြီးများအတွက် Lego အစုံ, 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား.
လက်ရှိအခြေအနေအရတည်ဆောက်နိုင်သောဖိနပ်တစ်မျိုးတည်းကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ပေါင် ၁၅.၀၁ / ဒေါ်လာ ၅.၀၁ / ယူရို ၅.၀၁ ဖြင့်သင့်အတွက် GWP ကိုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောအသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းသည်၎င်းထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးကြပ်မှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးသော့ခတ် (သို့) အီးတွင်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်xtra အစုံ ကျနော်တို့မှထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည် Lego သတင်းလွှာကစီစဉ်ထားသောအပြောင်းအလဲကိုဖော်ထုတ်နိုင်သလားသို့မဟုတ်အမှားထဲတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုသိရှိရန်အုပ်စု။
ကုမ္ပဏီ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖွဲ့သည်ယခုအခါ ၄၀၄၈၆ အတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီ adidas မူရင်းစူပါစတားသည်လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ သတင်းလွှာတွင်မှားယွင်းသောကိန်းဂဏန်းအမှန်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ freebie ကိုရအောင်ပေါင် ၉၅ / ဒေါ်လာ ၈၅ / ယူရို ၉၅ ကိုကုန်ပစ္စည်းများမှာယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။xtra အထက်နှင့်ကျော်လွန်။ ငွေသား 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား.
သငျသညျ 20 ကောက်ယူရန်ဇူလိုင်လ 40486 (သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာနောက်ဆုံး) သည်အထိရရှိပါသည် adidas မူရင်းစူပါစတား (ပြန်လည်သုံးသပ်), ဇူလိုင်လ 14 ၏မူလရရှိနိုင်မှုပြတင်းပေါက်အပေါ်အနည်းငယ်တိုးချဲ့မှုဖြစ်သည့်စတော့ရှယ်ယာထွက်ကုန်လျှင်, ဒါကြောင့်လည်းမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှင့်အတူကူးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် နှစ်ဆ VIP အချက်များဖြစ်ရပ်, ဇူလိုင်လ 12 ရက်နေ့တွင်စတင်သော။
← LEGO NINJAGO မော်ဂျူလာအဆောက်အအုံသည် ၂၀၂၂ တွင်ကောလဟာလသတင်းများထွက်ခဲ့သည်
Lego Star Wars 75315 Imperial Light Cruiser ကို Zavvi တွင်ရနိုင်သည် →